တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Saurabh Kumar အားလက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Saurabh Kumar အား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံစစ်သံမှူး Colonel Naveen Mahajan နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် ဆက်လက်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ တပ်မတော် နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပိုမို တိုးတက်ခိုင်မာစေရေး အားကစားအဖွဲ့များ၊ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များနှင့် အဆင့်အလိုက် ချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့များ အပြန်အလှန်စေလွှတ်နေမှုအခြေအနေများ၊ ပင်လယ်ရေကြောင်း တိုင်းတာရေးအပါအ၀င် နှစ်နိုင်ငံရေတပ်များအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိန်ဒိယနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Saurabh Kumar အား ယနေ့ မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိန်ဒိယနိုငျငံ သံအမတျကွီးနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိန်ဒိယနိုငျငံစဈသံမှူး Colonel Naveen Mahajan နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား လုံခွုံရေးနှငျ့ကာကှယျရေးဆိုငျရာမြားတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေားနှငျ့ ဆကျလကျမွှငျ့တငျ ဆောငျရှကျနိုငျမညျ့အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံနယျစပျဒသေ တညျငွိမျအေးခမျြးရေးအတှကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေား၊ တပျမတျော နှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုပိုမို တိုးတကျခိုငျမာစရေေး အားကစားအဖှဲ့မြား၊ ယဉျကြေးမှုအဖှဲ့မြားနှငျ့ အဆငျ့အလိုကျ ခဈြကွညျရေးအဖှဲ့မြား အပွနျအလှနျစလှေတျနမှေုအခွအေနမြေား၊ ပငျလယျရကွေောငျး တိုငျးတာရေးအပါအဝငျ နှဈနိုငျငံရတေပျမြားအကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အပွနျအလှနျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။